Su'aalaha La Isweydiiyo | Wax soo saarka birta ee Cangzhou Kuntai Production Co., Ltd.
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soo-saaris ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 15-45 maalmood kadib helitaanka lacag-bixinta. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heynay ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudbo shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku deyi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta akoonkayaga bangiga:
Guud ahaan waxaan aqbalnaa 30% T / T deposit hore, 70% T / T dheelitirka kahor imaatinka.
Ama L / C indhaha.
Erayada kale ee bixinta lacagaha waa laga wada hadli karaa.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh, sida boorarka heerka caadiga ah ama kiisaska. Baakadaha khaaska ah iyo shuruudaha xirxirka aan caadiga ahayn ayaa la heli karaa laakiin waxaa laga yaabaa inay ku soo oogaan lacag dheeraad ah.
Si amni u gaarsiinta alaabada